आज २०७७ भदौ २५ गते बिहीबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ २५ गते बिहीबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
२१ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) र सिनोभ्याक बायोटेक लिमिटेडले शनिबार थप चार मुलुकले आफ्नो निर्माणको क्रममा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षणको लागि अनुमति दिएको बताएको छ । चीन अहिले आफ्नो कोरोना खोप सफल बनाउने प्रयासमा लागेको छ । अहिले अनुमति दिने मुलुकमध्ये सर्बिया र पाकिस्तान पनि हुन् […]